Forex VPS - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
Trading Fx VPS - အထူးအကြံပြုထားသည့် Forex VPS (= Virtual Private Server)
A Virtual Private Server ကို (= VPS) မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သင်သည်သင်၏ PC ရဲ့သို့မဟုတ် Laptop ကိုဖွင့်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်တစ်ဦးတည်ခင်းဧည် server ပေါ်မှာ run နေတဲ့ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါတယ်။
A Forex VPS စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ရုံ stand-alone ကွန်ပျူတာနှင့်တူ ပေး. စီရင်။ သင်သည်သင်၏ upload တင်လို့ရပါတယ် ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ တစ်ဦးနှင့်သင်၏ပွဲစားရဲ့ Metatrader ပလက်ဖောင်း Forex VPS, သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအတိအကျသင်တို့ကဲ့သို့သူတို့ကိုမယ်လို့ run ။
တစ်ဦးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Forex VPS, အောက်ပါအချက်များကိုရှိပါတယ် အဓိကအားသာချက်:
သင်က VPS running စောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အမိန့်၌သင်တို့၏အင်တာနက်သို့မဟုတ်ပါဝါကွန်နက်ရှင်အပေါ်မှီခိုရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
တူသော A ကောင်းဆုံး Forex VPS အိမ်ရှင် ထရေးဒင်း FX VPS 99.9% တစ်ခုပွင့်နေချိန်ရှိပါတယ်။
သင်ဟာတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော Forex VPS ကိုသုံးပါရန်ဖူးအဘယ်ကြောင့်
သငျသညျအိမ်မှာသင့်ရဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု (များစွာသောလူများအတွက်မကြာခဏဖြစ်ပွားနေ) ဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်, သင့် Forex EA ၏ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်သို့မဟုတ်သင့်စေခြင်းငှါ Forex စက်ရုပ် ကုန်သွယ်ရေးအလယ်၌ဖြစ်နှင့်စနစ်တကျထုတ်ပိတ်ဖို့မည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ခုခုကိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဤသည်အလွန်အဘိုးထိုက်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကယုံကြည်စိတ်ချရသော VPS provider ကဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်နှင့် run ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူမဆိုလေးနက်သောကုန်သည်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည် FX စက်ရုပ်။ သင့်ရဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ Forex တဲ့ Expert Advisors အကြံပေးအဖွဲ့"တစ်ပြားမှ-ပညာရှိပေါင်-မိုက်မဲ။ " ဖြစ်ပါဘူး
အရာဆုံးဖြတ်ချက်ချ VPS ပံ့ပိုးပေး သုံးစွဲဖို့, ကထောက်ပံ့ပေးခြင်းရှိမရှိစဉ်းစားပါ:
99.9% အနည်းဆုံးစုစုပေါင်းပွင့်နေချိန်။ အထူးသဖြင့်အနိမ့်အောင်းနေချိန်။
user က VPS ကနေပြတ်တောက်သွားပါသည်အခါ session ကိုအဆုံးသတ်ခြင်းမဟုတျကွောငျးကို Windows server ကို။
အပြည့်အဝလုံခြုံရေးနှင့် privacy ကို။
ဒီအချက်တွေထည့်သွင်းစဉ်းစား, ကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုနိုင် ထရေးဒင်း FX VPS ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်သရုပ်ပြစမ်းသပ်အကောင့်သည်။
Trading Fx VPS အကြောင်း - ဤအကောင်းဆုံး Forex VPS ၏အားသာချက်ကိုယူပါ
ထရေးဒင်း FX VPS ဝန်ကြီးချုပ်စိတ်ကြိုက်ကမ်းလှမ်း Virtual Private Server များ အထူးသဖြင့်ကုန်သည်များသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာအားကိုး VPS ဖြေရှင်းချက်ရှုပ်ထွေးတဲ့အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်များအတွက်ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာဖြည့်တင်းနှင့်အတူကုန်သည်များပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်အမျိုးမျိုးသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ရှိရေးကွန်ပျူတာလုံခြုံရေး, ကွန်ရက်နှင့် system အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ကြီးမားအသိပညာပိုင်ဆိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့တင်သည့်ကတည်းကအသင်းကိုအဆက်မပြတ်သူတို့၏, အကျိုးရှိစွာဗဟုသုတနှင့်တတ်နိုင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်သုံးသပ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဤသည် Forex VPS Hewlett Packard, Dell, Intel က & IBM ကကနေပထမဦးဆုံးအတန်းအစားပစ္စည်းကိရိယာများပေးထားပါတယ်။ ဟာ့ဒ်ဝဲပေးအမျိုးမျိုးလွန်စွာဆိုဟာ့ဒ်ဝဲပျက်ပြားမှုအန္တရာယ်ကိုလျော့ကျသွားသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ VPS အားကောင်းတဲ့, ယုံကြည်စိတ်ချရသော High-end ဆာဗာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်သောအာမခံချက်ရှိသည်။ ဆာဗာက high-speed ကို SAS နှင့် SSD ကို drives တွေကိုပေါ်တွင်တည်ဆောက် SSD ကို RAID10 disk ကိုခင်းကျင်းနှင့်အတူ euipped နေကြသည်။ သူတို့ကပိုမြန် SATA drives တွေကိုသုံးပြီးအများဆုံး hosting provider များကိုထက် 10-20 ကြိမ်နှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်မှမြန်နှုန်းမြင့် access ကိုဆက်ကပ်။ RAID10 ခင်းကျင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကုမ္ပဏီသင့်ရဲ့ကို virtual ဆာဗာကိုဒေတာ hard drive ကိုပျက်ကွက်၏အမှု၌သွားပြီမည်မဟုတ်ပါသေချာ။
Trading Fx VPS နှင့်ပတ်သတ်သောအချက်အလက်များ - ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးအကြံပြုထားသည့် Forex VPS
ထရေးဒင်း FX VPS ကို virtual servers များ Over-ရောင်းချသူကိုများစွာသောအခြား VPS ပံ့ပိုးပေးမတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့က VPS ဖြေရှင်းချက်များအတွက်အာမခံချက်အရင်းအမြစ်များကိုဆက်ကပ်။ သူတို့က Kernel Virtual Machine (KVM) နှင့် VMware virtualization နည်းပညာချမှတ်။
VMware ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မူဘောင်မှတဆင့်ကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ VPS ကိုဖြတ်ပြီး 100% င့်နေချိန်အာမခံပေးနိုင်သည်။
အားလုံးဟာဆာဗာ ထရေးဒင်း FX VPS လေးပထဝီအနေအထားအရသီးခြား Data ကိုစင်တာများတွင်တည်ရှိသည်ကြသည် - လန်ဒန်, နယူးယောက်, အမ်စတာဒမ်နှင့် Frankfurt, အထူးသဖြင့်အဘို့ကောက်ယူ ultra အနိမျ့ latency နှင့်ကမ္ဘာရဲ့အဓိကပွဲစားများနှင့်ငွေဖြစ်လွယ်ပေးသူမှဝင်ရောက်ခွင့်။
အဆိုပါဒေတာစင်တာများထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ကြပြီးပုံမှန်ကုမ္ပဏီများမှအမည်ရ, Equinix, Leaseweb & Internap ထံမှလာ၏။
ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမှာခြွင်းချက်ဖြစ်ပါသည် ထရေးဒင်း FX VPS။ သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်း algo ကုန်သွယ်စီးပွားဖြစ်ကုမ္ပဏီများ, တစ်ဦးချင်းကုန်သည်များနှင့်အခြားဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်ပြီ ထရေးဒင်း FX VPS န်ဆောင်မှု။
ထရေးဒင်း FX VPS, အခြားမည်သည့် Forex VPS & MT4 အောင်းနေချိန်စမ်းသပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
လူအများစုဟာ Ping မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူအောင်းနေချိန်စမ်းသပ်ရန်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, Ping မက်ဆေ့ခ်ျခြုံငုံစနစ်များနှင့်စစ်မှန်တဲ့အောင်းနေချိန်အကြောင်းကို misguiding အချိန်အများစုမှာအပေါ်အောင်းနေချိန်အကြောင်းကိုသာကြမ်းတမ်းအစီအမံပေးပါ။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာကွန်ရက်ပေါ်တွင်နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအခြေခံအဆောက်အအုံအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောဝယ်လိုအားနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောမက်ဆေ့ခ်ျကို protocol ကို အသုံးပြု. မက်ဆေ့ခ်ျများအရောင်းအဝယ်ဖြစ်။
ဘယ်လောက်မြန်ပါ (Ping မက်ဆေ့ခ်ျများကဲ့သို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကို TCP / IP နှင့်မ ICMP) ကိုမက်ဆေ့ခ်ျနှစ်ခုနေရာများအကြားကွန်ယက်မှတဆင့်ခရီးသွားလာ။
ဘယ်လောက်မြန်သည့်ကုန်သွယ်ယုတ္တိဗေဒ software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲမှီခိုသည်နှင့်လည်း Ping နှင့်အတူတိုင်းတာမရနိုငျသောက၎င်း၏တွက်ချက်မှု, ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။
ဥပမာဝေးတိကျမှုကနေပေမယ့်နည်းလမ်းနှင့်အတူစစ်မှန်သော MT4 setup ကိုရှာဖွေပေးပို့ရန်စမ်းသပ်ဖို့တစ်ဦးထက်ပိုသောအသံ technique ကိုဖြစ်ပါတယ် Ping မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်းထက်အောက်ကဗီဒီယိုအပေါ်ရှင်းပြသည်။
ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်များအတွက်ရှာဖွေပေးပို့ရန်စမ်းသပ်သူကို download လုပ်ပါ!
ပြီးစီးပြီးနောက် MT4 ၌ကျန်ကြွင်းမျှပွင့်လင်းအမိန့်သို့မဟုတ်ရာထူးရှိပါတယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အမှု၌သင်တို့ကိုသာသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်ပြုထက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကောင့်ပေါ်မှာစမ်းသပ်လုပ်လိုရှိ၏။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုမှာခြွင်းချက်ဖြစ်ပါသည် ထရေးဒင်း FX VPS.
တရားဝင်အရောင်းအ ၀ ယ် Fx VPS ဝက်ဘ်ဆိုက် - အကောင်းဆုံးအပ်နှံထားသည့် Premium Forex VPS Hosting ကိုကြည့်ပါ